सात प्रदेशको बजेटमा स्वास्थ्य ! के के छन स्वास्थ्यका योजनाहरु ? (पूर्ण पाठ) – Public Health Concern(PHC)
सात प्रदेशको बजेटमा स्वास्थ्य ! के के छन स्वास्थ्यका योजनाहरु ? (पूर्ण पाठ)
in जनस्वास्थ्य समाचार, राष्ट्रिय
Budget Bhasan 2076
२५ जेठ, काठमाडौं । संघीय बजेटले प्रदेशमा जाने रकमको टुंगो लगाएसँगै अहिले ७ वटै प्रदेशमा धमाधम बजेट निर्माणको काम जारी छ । प्रदेश सरकारहरुले १ असारमा आ-आफ्नो प्रदेश संसदमा बजेट पेश गर्नेछन् ।
गरिबी निवारण, जलविद्युतका माध्यमबाट उज्यालो प्रदेश निर्माण, रोजगारी सिर्जना र शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा पनि प्रदेशहरुले बजेट छुुट्याउने तयारी गरिरहेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा सबैजसो प्रदेशले परियोजना बैंकलाई कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । परियोजना बैंक केन्द्रकै अवधारणा हो ।हेरौ सातै प्रदेशले स्वास्थ्यका कस्ता निति तथा कार्यक्रमलाई प्राथामिकातामा राखेको छ /
प्रदेश नं १ : जेठभित्रै पूँजीगत खर्च गर्ने ल्क्ष्य
प्रदेश नं १ को विनियोजन विधेयक, २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकता अनुसार आगामी आवको बजेटले सुखी र समुन्नत प्रदेश निर्माणलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको छ । संघीय सरकारले बनाएको पन्ध्रौं योजनाका आधारमा कार्यक्रम तय गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा प्रदेशका सबै नागरिकको पहुँच बढाउने र प्रदेशलाई शिक्षित र स्वस्थ्य प्रदेश बनाउने योजनालाई बजेटमा समावेश गर्ने तयारी छ ।
यस प्रदेशले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको छ । सीमान्तीकृत, लोपोन्मुख, वर्ग, जाति एवं समुदाय, दुर्गम भेगका नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिकको संरक्षण, सुरक्षा र विकासमा ध्यान दिइने प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।
एनजीओ र आइएनजीओले प्रदेशले तोकेको क्षेत्रमा मात्र बजेट खर्च गर्न पाउने गत वर्षको कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइने प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।
प्रदेश २ -हामी दुई- हाम्रा दुई
प्रदेश नं दुईले आगामी आवको बजेटमा जनसंख्या नियन्त्रण गर्न एक आकर्षक नारा अगाडि बढाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । ‘हामी दुइ हाम्रा दुई’ प्रदेश नं २ को नारा हो ।
प्रदेश स्तरको प्रांगारिक तथा जैविक मल कारखाना स्थापना गर्न प्रदेशले बजेट छुट्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
आठवटै जिल्लामा दलित, गरिब आवास योजना अन्तर्गत सामूहिक आवास निर्माण गर्ने तथा ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियान संचालन गरी विपन्न वर्गका बालबालिकालाई १ देखि ८ कक्षासम्म प्रतिविार्थी मासिक ३ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा बजेटले गर्दैछ ।
६० वर्षभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य र यातायात सेवामा प्राथमिकतामा राखी सहुलियत दिने घोषणा बजेटले गर्दैछ ।
प्रदेश तीन- सम्पूर्ण सरकारी कारोबार बैंकिङ प्रणालीमा
एनजीओ र आइएनजीओका कार्यक्रम तथा गतिविधि सञ्चालन गर्नुपूर्व प्रदेश सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिने तयारी छ । आगामी आवमा गैर सरकारी संस्थाका कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारको आर्थिक विवरणमा आवद्ध बनाउने गरी नीति बनाइएको छ ।
गण्डकी प्रदेश- आधारभूत खानेपानी प्राथमिकता
प्रदेशबासीका सबै घरधुरीमा आधारभूत खानेपानी सुविधा पुर्‍याउने योजना अनुसार संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने /
प्रदेश नं ५- नसर्ने रोग लाई प्राथामिकता
‘फलफूल खाऔं, स्वस्थ रहौं’ भन्ने नारासहित तराई, पहाड र हिमालमा जुन प्रकृतिको फलफुल पाइन्छ, त्यसलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरी फलफुल प्रवर्द्धन गर्ने योजना सरकारको रहेको छ ।
ब्रोङकाइटिस र दमजन्य रोगको उपचारमा प्रतिबिरामी ५० हजारसम्म निःशुल्क उपचारको घोषणा बजेटले गर्दैछ । ‘स्वास्थ्य व्यापार होइन, सेवा हो भन्ने’ मान्यता स्थापित गर्ने प्रतिवद्धता सरकारको छ । ‘स्वस्थ पानी, स्वस्थ जीवन’ भन्ने नारासहित पिउने पानीको परिक्षण गर्न प्रयोगशाला बनाउने तथा प्रदेश परियोजना बैंक स्थापना गरी बैंकमा दर्ता भएका आयोजनालाई मात्रै कार्यान्वयन गरिने नीति प्रदेश सरकारले लिँदैछ ।
गरिबीको मारमा परेका घर परिवारलाई लक्षित गरी उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम ल्याई गरिबीबाट मुक्त गर्ने । ‘जोखिमपूर्ण यात्रा बहिस्कार, हाम्रो सुरक्षाको आधार’ अभियान सञ्चालन गरी दूर्घटना न्यूनीकरणमा पनि सरकारले बजेट छुट्याउने भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश- समृद्ध कर्णाली-सुखारी कर्णालीबासी
कर्णाली प्रदेशले समृद्ध कर्णालीको नारा तय गरी सोहीअनुसार बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा पछि परेको यस प्रदेशले आफ्नो नारा नै ‘समृद्ध कर्णाली-सुखारी कर्णालीबासी’ तय गरेको छ ।
निजी, सहकारी, सामुदायिक र गैरसरकारी संघसंस्थाहरुलाई सरकारको विकास साझेदारको रुपमा स्वीकार गरी तोकिएको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । यस्तो लगानी उत्पादनमुलक र प्रतिफलयुक्त आयोजनामा लगाउनु पर्ने भएको छ ।
‘कर्णाली स्वयमसेवक सेवा’मार्फत दक्ष जनशक्तिको अभाव परिपूर्ति गर्ने गरी कार्यक्रम संचालनको तयारी समेत प्रदेश सरकारले गरेको छ । ‘साक्षरकर्णाली अभियान’, ‘स्वस्थ नागरिक : समृद्ध प्रदेश’, ‘सामुदायिक नर्स कार्यक्रम’ जस्ता अभियानमा सरकारले बजेट छुट्याउँदैछ ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न र प्रतिव्यक्ति आय बढाउन न्यूनतम आयआर्जनका विशेष कार्यक्रम लागु गर्ने तयारी सरकारको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश- गरिबी निवारण प्राथमिकतामा
सुदूरपश्चिम प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत गरिबी न्यूनीकरण लक्षित कार्यक्रम घोषणाको तयारी गरिरहेको छ ।
प्रदेशका सबै जिल्लाको सन्तुलित विकास गर्ने, निरक्षता उन्मुलन, आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने योजना समेत बजेटले समेट्ने छ ।
बजेटले बझाङ, बाजुरा, दार्चुला र अछाम जिल्लालाई विशेष प्राथमिकता दिने भएको छ । ती जिल्लामा रहेको छाउपडी प्रथा, जातीय छुवाछुतजस्ता कुरिती हटाउने विशेष कार्यक्रमसहित अभियान सञ्चालनको तयारी सरकारले गरेको छ । श्रोत सामाग्रीहरु
Tags: बजेट भाषणस्वास्थ्यका निति तथा कार्यक्रमस्वास्थ्यमा प्रदेश बजेट
स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीलाई सचिव थपलियाको ११ बुँदे निर्देशन
सिन्धुपाल्चोकमा झाडापखलाको महामारी !
स्वास्थ्यमा समायोजन : फाजिलका कर्मचारीहरु लाई आबश्यकता अनुसार खटाईने !